အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ယာယီသမ္မတ… – PVTV Myanmar
ဒူဝါလရှီးလ၏ ကိုဗစ်၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူသို့ ပန်ကြားချက်
Like – 17K Share – 3053
2021-07-18 at 6:15 PM
We respect our NUG”s President.
ဦး ဇင်း says:
2021-07-18 at 6:16 PM
We respect our NUG’s President . 😘😘😘😘😘
2021-07-18 at 7:35 PM
NUGအစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေလည်း ဂရုစိုက်ကြပါဗျာ NUG မရှိရင်လည်း လူငယ်တွေ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ရပါလိမ့်မယ်
Thet Tin says:
အမေစုအပါအဝင်၊သမ္မတကြီးနဲ့ NUG အဖွဲ့ဝင်ခေါင်းဆောင်များအားလုံး ကျန်းမာ၊ချမ်းသာ၊လန်းဖြာကြပါစေ။ဘေးရန်ကင်းပါစေ။ 🙏
CN Win says:
2021-07-18 at 11:30 PM
အားကိုပါတယ် nug. သမတကြီး
2021-07-18 at 11:34 PM
ကျန်းမာပါစေ သမ္မတကြီး အမြန်ဆုံးမအလအာဏာရူးကိုဖြုတ်ချနိုင်ပါစေ ပြည်သူဘက်ကကူညီဖို့အသင့်ပါ
2021-07-19 at 12:08 AM
2021-07-19 at 1:40 AM
ေစတနာစကားေတြက ရင္ထဲ ထိတယ္
မချစ်မမုန်း ဥပေက္ခာ says:
Hein Zarni Heinzarni says:
2021-07-19 at 7:26 AM
Han Aye Aung says:
မ.အ လ.ရယ်. အုပ်ချုပ်မှု့မှာလည်းစောက်သုံးမကျ. အခု့တိုင်လူတွေရောဂါဖြစ်နေဒါလည်းနင်မကယ်တင်နိုင်နင်ကိုတိုင်အောက်စီဂျင်ရှိပါတယ်လောက်ပါတယ်ဆိုပြီးခုံပေါ်တက်လေသံကောင်းတွေဟစ်ကြွေးတိုင်ပြည်ကရှိသမျှလည်းနင်ခိုးဝှက်ကျီနာကြီးကိုရောင်း.နိုင်ငံမှာလည်းဘာမှမရှိတော့
ရသမျှငွေကြေးတွေလည်းနင့်မိသားစု့အတွက်ဘဲလုပ်ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်တခု့မှစောက်သုံကျဒါမရှိလိုက်တာမA. LOးကြီးရယ်ငါနင့်ကိုဆဲဒါမဟုတ်ဘူးနော် နင့်ဟာနင်နင့်ကိုနင်ပေးထားတဲ့အမည်ကိုလေးဘေး
2021-07-19 at 8:06 AM
Khin Thuta Nwe says:
2021-07-19 at 8:23 AM
2021-07-19 at 12:55 PM
2021-07-19 at 5:45 PM
Sandar La Minn says:
2021-07-19 at 10:16 PM
AyeAye AyeAye says:
2021-07-21 at 5:21 PM
2021-07-22 at 12:56 AM
Thine Zaw says:
2021-08-09 at 8:51 PM